Abakhiqizi Directory - Abahlinzeki & Abakhiqizi Directory - Alietc B2B
Ukuze uthole isipiliyoni esingcono sicela ushintshe isiphequluli sakho ku-CHROME, FIREFOX, OPERA noma i-Internet Explorer.
Indawo Yemakethe ye-B2B
B2B Izindaba Nezindaba
Noma ngabe uphatha izimpahla ezenziwe noma izinto zokusetshenziswa, ujoyina i Indawo yemakethe yedijithali ingaba kuhle ebhizinisini kuphela. Ukuthi nguwe Ukuhweba kwezimpahla zabathengi ezifana Amathoyizi, Izingubo or ekhishini, noma usebenzelana nezinto ezingavuthiwe ezifana bauxite futhi i-potash, ngokusebenzisa izindwangu futhi amapulasitiki.
In the B2B esigcawini, abahlinzeki basebenzisa i-niche eyingqayizivele kulokho ngokungafani abakhiqizi abathengisa kuphela imikhiqizo yabo, noma abathengi, abathenga kuphela imikhiqizo, abahlinzeki yenza bobabili, okusho ukuthi uma ungumhlinzeki, i-Alietc ilusizo kabili kubhizinisi lakho.
Injabulo yokuhweba nge-Alietc ukuthi uma unemikhiqizo okufanele uyithengise, sizokusiza ekutholeni abathengi beqiniso enizoqala ngobuhlobo nabo ubudlelwano obuhlala buhlala futhi buzuzisa. Inhloso yethu ukwenza okufanayo ngemikhiqizo ofuna ukuyithenga. Esethu B2B yesikhulumi yakhelwe ngokucophelela ukuqinisekisa ukuthi zonke izidingo zakho njengomthengi noma umthengisi zizohlangabezana kahle, nangempumelelo.
Ukuze wenze lokhu, sizokunikeza wonke amathuluzi owadingayo bese sikunikeza ukuholwa nezeluleko eziningi. Noma ngabe ungumthengisi onolwazi kakhulu noma manje ususemhlabeni wokusebenza njengomphakeli, sincoma kakhulu ukuthi ufunde i- 'Suppliers Guide' njengoba igcwele imininingwane ewusizo ukukusiza ukuba usebenzise isikhathi sakho osisebenzisa kakhulu thina at I-Alietc.
Odinga ukukwenza ngokulandelayo
Okokuqala, udinga ukubhalisela kwenye yethu amapulani wobulungu
Uma usubhalisile I-Alietc, uzokwazi ukudala iphrofayili yakho.
Uyacelwa uthathe isikhathi esincane ukwakha iphrofayela ebamba iso ezoheha abathengi noma amaklayenti angaba khona - sidale Umhlahlandlela ofanele wokuDala iphrofayela yakho ye-Alietc otholakala kumalungu kuphela. Kanye neminye imihlahlandlela yomsebenzisi engabalulekanga, umhlahlandlela wokudalwa kwephrofayela yakho uzokusiza ukuthi ushaye phansi ugijime futhi ugcine isikhathi sakho ngokungadingekile.
Qala Ukuthenga noma Ukuthengisa!
Ake siqale ngalokho okudingeka ukwenze uma unemikhiqizo ethengiswayo
Bhala imikhiqizo yakho (noma) imikhiqizo oyithengisayo. Uma ubala imikhiqizo yakho, awufaki inani. Isizathu sokuthi intengo ingakhonjiswa yingoba sikholelwa ukuthi ukuba namandla okuxoxisana ngokusekelwe kunokwehluka okuningana kusebenza okusebenzayo kakhulu futhi kufinyelela imiphumela engcono yabakhiqizi nabathengisi. IVolumu nesikhathi-sikhathi kungokuhluka okubili okungathinta kakhulu intengo yeyunithi, ngakho-ke akunangqondo ukuthi ungazibekisela inani elilodwa, elihleliwe. Yonke imikhiqizo efakwe kuhlu izofaka isicelo "Sokuxhumana nomakhi" abathengi abazoyisebenzisa ukuze bavule izingxoxo. Ekuqaleni, leso sicelo sizofika lapha e-Alietc futhi uma sesike sahlola ukuthi umthengi usemthethweni yini, uzonikezwa imininingwane yakho yokuxhumana bese ukhululekile ukuxoxisana ngqo nomthengi.
Bheka Izicelo Zomthengi. Ngokungafani nezinye izimakethe zedijithali, i-Alietc ikhuthaza abathengi ukuthi bathumele izicelo zemikhiqizo. Bazokutshela ukuthi mangaki imikhiqizo abayifunayo nokuthi badinga ukulethwa nini. Ungabeka 'ibhidi'. Kulula lokho! Uma unomuzwa wokuthi umthengi ushiye imininingwane ebalulekile, singakuxhumanisa nomthengi ukuze ukhiphe imininingwane emihle.
Manje, nakhu okudingeka ukwenze uma unohlu lwemikhiqizo ofuna ukuyithenga.
Isinyathelo sakho sokuqala ukuthi ufune leyo mikhiqizo ofuna ukuyithenga futhi, okubaluleke kakhulu, kubakhiqizi nabathengisi balowo mkhiqizo
Thumela isicelo Sokuthenga Komkhiqizo. Ungasebenzisa injini yethu yokusesha enamandla ukuthola abakhiqizi noma abahlinzeki bemikhiqizo oyifunayo bese uthumela isicelo “Sokuthengwa Komkhiqizo”
Amabhidi endawo. Ungafaka ibhidi kunoma yimiphi imikhiqizo ebhalwe ukuthi ithengiswe endaweni yesikhulumi se-Alietc
Thumela Isicelo Somkhiqizo. Ungasifaka isicelo somkhiqizo, lapho usenza kucace ukuthi yimiphi imikhiqizo () oyifunayo ukuyithenga nokuthi yini okulungele ukuyikhokhela (yona) - noma yimuphi umhlinzeki / umenzi onganikela ngemikhiqizo oyikho oyifunayo uzothola isaziso esisheshayo sesicelo sakho somkhiqizo abese ezothintana uma intengo ofuna ukuyikhokha inenzalo yazo.
Indlela yakho yokuqala kunoma yimuphi umakhi / umphakeli izohlala ivela nge-Alietc ukuze sikwazi ukubheka ukuthi isicelo sakho siyiqiniso yini. Uma nje sijabule ukuthi ungubhizinisi noma umuntu uqobo, isicelo sakho sizodluliselwa kumkhiqizi / umphakeli, nemininingwane yakho yokuxhumana, futhi kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke ungasebenzelana.
Lapha e-Alietc into eyodwa esifunde ngayo kakhulu ukuthi izivumelwano ezinhle kakhulu zivame ukuza ngenxa yezingxoxo. Lokhu kunjalo ikakhulukazi lapho kukhona ivolumu enkulu noma amandla wokuphinda njalo ama-oda. Kunezinto eziningi ezidinga ukuthi zibhekwe uma kuziwa ezindabeni zokubonisana.
Isinyathelo sakho sokuqala ukuthi ubhale imikhiqizo onayo oyithengisayo bese umeme izimemo ezivela kubathengi abakwaziyo nabazithandayo. Ungafaka nohlu lwemikhiqizo ngenani elithile uma ukhetha njalo.
Okwesibili, ungabheka database yethu ebanzi yamalungu afuna ukubheka ukuthenga imikhiqizo oyithengisile, noma abathengile leyo, noma imikhiqizo efanayo, phambilini. Ungabathumela inani lapho uyakwazi ukunikela khona imikhiqizo abayifunayo.
Ngicela uqaphele: Ukuze uqinisekise ukuthi wonke umuntu osebenzisa imakethe ye-Alietc wenza njalo emoyeni ophelele esebenza le makethe, kuye ngezinga lakho lobulungu, kungadingeka ukuthi ukhokhe uhlu oluncane lokufaka ohlwini noma imali yokubhida. Inhloso yethu ukuqeda 'abagaxekile' nabasebenzisi abangaxhamazeli epulatifomu, futhi lokhu kukhombise ukuthi kuyindlela ephumelela kakhulu. Lokhu kuchazwe kabanzi esigabeni sobulungu.
I-Alietc - Ingaphezulu Kakhulu KuneMakethe Yedijithali
I-BAO VY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
imikhiqizo: PU impahla, umshini PU, PU izithasiselo, imikhiqizo PU amagwebu, Kushintshwe MDI
I-Baoding Aofa Rigging Manufacturing Co., Ltd.
imikhiqizo: I-Impresión de revistas, impresión de libros, Impresión de cuadernos, i-bolsa de embalaje, i-caja de embalaje
I-Baoding Baigou Tianshangxing Bag Leather Goods Co., Ltd.
imikhiqizo: i-ajwain oil, u-cumin oil, i-anise oil, u-eucalyptus, uwoyela we-basil
I-Baoding Boao PS Equipment Co., Ltd.
imikhiqizo: Impepho, Isiphathi sempepho, Imbiza Yokutshala, Imbali Yembali, Ubhasikidi Wokugcina
Imithwalo yeBaoding Bodian And Cases Bag Co., Ltd.
imikhiqizo: Coco desecado en polvo, Coco Semi descascarillado, aceite de coco, hojuelas de coco, chile verde G4
I-Baoding Chendiao Hoisting Machinery Manufacturing Co., Ltd.
imikhiqizo: Umshini Wokugcwalisa Amanzi, Isitshalo Samabhodlela Amanzi, Umshini Wokufaka Amanzi, Umugqa Wokukhiqiza Amanzi, Isitshalo Samanzi Amaminerali
I-Baoding Chuangrui Precision Pump Co, Ltd.
imikhiqizo: i-generator kadizili, ugesi ophehla ugesi, i-generator yasolwandle, i-generator yombhoshongo omncane, izingxenye ezisele ze-generator
I-Baoding Crown Import & Export Trading Co, Ltd.
imikhiqizo: I-MQ silicone resin, i-elektroniki ye-silica gel, i-Silicone sealant, i-Silicone ingcindezi ebambekayo
I-Baoding Faithful Industry Co., Ltd.
imikhiqizo: isihlalo sokugunda izinwele, isihlalo salon, isihlalo sokugunda, isitulo salon, isihlalo sobuhle
I-Baoding Habo Arts And Crafts Manufacturing Co., Ltd.
imikhiqizo: Air compressor
I-copyright 2020 © Alietc.com Indawo yeMakethe ye-B2B & Directory, Wonke Amalungelo Agodliwe. I-T & C. - PP
Ukhohlwe iphasiwedi yakho ?
Setha kabusha i-akhawunti yami